Jabuuti oo lagu helay inay tallaabo sharci darro ah ka qaadday DP World - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
January 14, 2020 at 14:43 Jabuuti oo lagu helay inay tallaabo sharci darro ah ka qaadday DP World2020-01-14T14:43:20+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Hase ahaatee, ilaa hadda, Jabuuti waxay dhagaha ka fureysatay dhammaan go’aannada kasoo baxay maxkamaddaas, iyadoo la ogyahay in heshiiska hore iyo qandaraaskaba ay ku saleysnaayeen sharciga Ingiriiska.
Dekedda Doraleh ee ay DP World ka dhistay Jabuuti ayaa sameysay shaqo abuurista ugu weyn ee dalkaas, waxayna noqotay isha uu Jabuuti kasoo galo dhaqaalaha ugu badan, sanad kasta oo ka dambeeyay xilligii la furay.
Qandaraaskii ay labada dhinac galeen markii ugu horreysay wuxuu ahaa in DP World ay gacanta ku heyso maamulka dekedda Doraleh.
Mas’uuliyiinta Shirkaddan dekedaha maalgalisa ayaa hadda sugaya jawaabta ay dowladda Jabuuti ka bixin doonto xukunka ugu dambeeyay ee ay maxkamadda soo saartay.
Haddii markan wax jawaab ah laga waayo jabuuti, garsoorka waxay sheegeen inay guda gali doonaan sidii loo sharciyeyn lahaa lacagta magdhowga ah ee la siinayo DP World.
Xagey gaarsiisan tahay awoodda DP World?
DP World waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn adduunka ee ka shaqeeya maal-galinta iyo dhismaha dekedaha iyo dhismeyaasha laga sameeyo gudaha badda iyo barriga.
Waxay ka howl-gashaa ilaa 78 xarumood oo isugu jira dekedaha ka dhisan barriga iyo badda, kuwaasoo hoos taga ilaa 50 ganacsi oo ay DP World ku leedahay in ka badan 40 waddan oo ku kala yaalla lix qaaradood.
Shirkaddan oo dhaqaale badan kasoo xareysa suuqyada kala duwan ayaa xiriir aad u wanaagsan la leh dowladaha caalamka, kuwaasoo ay kala shaqeyso sidii ay u xoojin lahayd ganacsiyadeeda, iyadoo u maalgalisa kaabayaasha dhaqaalaha.
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo bishii June, 2018, wareysi gaar ah siiyay laantaaf-Soomaaliga ee BBC ayaa ka hadlay dhawr arrimood oo ay ka mid tahay dacwadda u dhaxeysa dowladdiisa iyo shirkadda DP World.
« Muqdisho: 13 Caruur Ah oo Gaajo u Dhimatay
Somaliland government launches mobile platform for salary payments »